काठमाडौं स्थित त्रिभु`वन शिक्षण अस्पताल`मा अक`ल्पनीय घटना : जसले त्र`सित ब`नायो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं स्थित त्रिभु`वन शिक्षण अस्पताल`मा अक`ल्पनीय घटना : जसले त्र`सित ब`नायो !!
काठमाडौँ । काठमाडौं स्थित त्रिभुवन शि`क्षण अस्प`तालमा बिही`बार बिहान कल्प`ना नगरेको घटना भएको छ । शल्य`कृया गर्न ठिक्क पारेकी एक बालिकामा कोरोना पोजेटि`भ देखिएपछि अब के गर्ने भन्नेमा सरोका`रवाला तयारीमा जुटेका छन् ।
कपिलवस्तुकी ६ वर्षीया बालि`कालाई शल्य`कृयाका लागि त्रि`वि शिक्षण अस्पता`लको न्यूरो सर्जरी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो । उनको स्वासन`लीमा मा`सु पला`एको देखिएपछि चि`कित्स`कले शल्य`कृयाको तयारी गरेका थिए । शल्य`कृया गर्नु अघि चिकि`त्सकहरुले सतर्क`ताका लागि स्वाव निकालेर कोरोना परि`क्षण गरेका थिए । उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
शिक्षण अस्पतालमा शल्य`क्रिया गर्नका लागि भर्ना गरिएकी बालिकामा कोरोना पोजि`टिभ देखिए`पछि अहिले त्यहाँ कार्यरत चि`कित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, अन्य बिरामी तथा तिनका कुरु`वाहरु त्रसित भएका छन् ।
त्रिवि अस्पतालस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएअनुसार उनलाई ई.एन.टी. (नाक कान घाँटी) विभाग को ओ.पी.डी.मा जाँच गरिएपछि शल्यक्रियाका लागि अन्तिम तयारी गरिएको थियो । नाक कान घाँटीको उपचार हुने भवनलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भनेर तयार पारिएको छ ।
त्यसैले उनलाई शल्यकृयाका लागि न्यूरो सर्जरी वार्डमा भर्ना गरेर राखिएको थियो । शिक्षण अस्पताल स्रोतका अनुसार अहिले उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि टोली अस्पताल पुग्दै छ । त्यसपछि मात्रै कसरी अस्पताल सिल गर्ने वा के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।